कति भित्राउँछन कर्नेल सावले केटी ! – YesKathmandu.com
काठमाडौ । राज्यको बर्दी लगाएर देशको रक्षा गर्नुपर्ने सैन्य अधिकारीले ठाउँठाउँमा युवती बटुल्दै तमासा देखाएपछि कुन हविगत होला ? सानातिना पनि हैनन्, नेपाली सेनाका फुल कर्णेलले अनुहार परेकी युवती देख्नासाथ बिहे गरिदिँदा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रमिता चलेको छ । उमेरले ४३ नाघेका यी कर्णेल कामपा– ५, घर नं. १३२, टंगालका महेशमशेर जबरा (हाल खरिपाटीमा कार्यरत) हुन्, जसलाई अहिले दुई–दुईवटी महिलाले पति दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । घरी एउटीलाई सकारेको कागज गर्छन्, घरी अर्कीलाई । एउटीसँग मिल्दा अर्कीले अर्कै मुद्दा हालिदिने, अनि अर्कीसँग मिल्दा फेरि अर्की जागेर अदालत पुग्नाले जिल्ला अदालत नै सिनेमाको सुटिङस्थलझैँ बन्न पुगेको छ । पर्शुरामसमशेरका छोरा यी कर्णेलचाहिँ रमा शाह नामक महिलाका खास पति हुन् । घरकी पत्नी उनको यस्तो चालाबाट हैरान भई ०५९ सालमै अलग्गिएकी छन् । पत्नीले त छाडेर अमेरिका गइन्, जोगाउन खोज्ने अर्का कर्णेल साथी अहिले उल्टै फँसेका छन्, अदालतमा झूठो बकपत्र गर्नाले ।
नाचगानको पेशा गर्ने हेटौंडा– १ की १९ वर्षीया नम्रता स्याङताङ एउटा त्यस्तै कार्यक्रम देखाउन धरान गएकी थिइन्, ०७० सालको साउन महिनामा । इटहरीस्थित पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरअन्तर्गत नम्बर एक राजदल गणमा कार्यरत थिए, कर्णेल महेशमशेर । ‘राम्री केटी आएका छन्’ भन्ने सुन्नासाथ नाचगान हेर्न धरान हान्निएका उनले त्यहाँ पुगेर मोबाइल नम्बर साटासाट गरे । रङ्गमञ्चमा मात्र हैन, बाहिरी हेराईमा पनि नम्रता हिस्सी परेकी युवती । यस्तो देखेपछि कर्णेलको मन थामिएन । विहान उठेदेखि राति नसुतुञ्जेल नम्रतासँगै फोन गरेर समय काट्ने स्थितिमा पुगे । गरिबकी छोरी, नाचगान गरेर गुजारा चलाउनेलाई सेनाको कर्णेल, त्यो पनि फुल कर्णेल भएपछि के चाहियो र ? नम्रताका बुबा पहिल्यै बितेको । हेटौंडाको घरमा आमा एक्लै । कर्णेल नम्रतालाई भेट्न त्यता पनि पुगे । गरिबी देखेर सहानुभूति प्रकट गरे । साउनबाट शुरु भएको पिरती ‘अरुबेला अन्त, चैतमा जन्त’ भनेजस्तो चैतमै पुगेर प्रणयमा परिणत भयो । धरानको दन्तकाली मन्दिरमा सिन्दुर पोते गरी कर्णेलले नम्रतालाई साथमै राखे, इटहरी व्यारेकमा । यसपछि कहिले भेडेटार, कहिले पाख्रिबास त कहिले इलामका चियाबगानतिर घुम्न गए । आखिरमा रङ्गमञ्चबाट उठाइएकी युवतीबाट बुझाउनुसम्म ‘प्यास’ बुझाएर ९ महिनापछि नम्रतालाई भने, ‘तिमीजस्तो अनपढ केटीलाई स्वास्नी बनाएर राख्न सक्दिनँ । आफ्नो बाटो लाग ।’ बर्दी र हतियारको आडमा कसैकी छोरी हत्याएको र त्यही दुई अस्त्र प्रयोग गरी लखेटिएकी युवतीसँग के नै उपाय थियो र, ‘निक्लेर जाऊ’ भन्नासाथ बसिरहने साहस भएन । बरु, हेटौंडातिरका वकिलसँग सोधिन्, उपाय । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्ती ८२ नं. अनुसार लोग्नेस्वास्नीको महल ५ क र ६ नं. का आधारमा फिराद लेखाइन् । ०७१ पुस १७ गतेको फिरादमाथि कर्णेल महेशसमशेरले २२ गते प्रतिउत्तर लेखे । आखिर चरन फेर्न पल्किएको बाख्रा एउटै चरनमा किन रम्थ्यो र ? २२ गते प्रतिउत्तर लेख्ने कर्णेलले त्यही दिन, त्यही जिल्ला अदालतमा अर्की महिलासँग मिलापत्र गरे । अर्थात्, उनी रहेछन्, डबल रोलका हिरो । जतिबेला नम्रतासँग प्रेम, विवाह र घुमफिर चल्दै थियो, अर्कातिर अर्की युवतीसँग पनि त्यस्तै चल्दै रहेछ । जब नम्रता पाए, तब पहिलाकीलाई बेवास्ता गरेका रहेछन् । र, पहिलाकीले काठमाडौंकै जिल्ला अदालतमा नाता कायम मुद्दा हालेकी रहिछन् । नम्रताले त्यही मुद्दा हालेपछि इन्कारी प्रतिउत्तर हालेका उनले त्यही मितिमा पुरानी प्यारीलाई मिलापत्रमार्फत नाता कायम गराइदिए । कुरा यस्तो रहेछ– पूर्वी पृतनामै रहँदा इटहरी जेसिजका जीवन पराजुलीले आफ्नी साली भन्दै भोजपुर जिल्ला, भोजपुर गाविस– १ स्थायी ठेगाना भएकी २४ वर्षीया इम्तिया राईसँग कर्णेलको सम्बन्ध बनाइदिएका थिए । इम्तिया पनि पेशाले नम्रताजस्तै कलाकार हुन् । अनुहार हिस्सी परेकी युवती भए पुग्ने यी कर्णेल आफू त डुबेडुबे अर्का कर्णेललाई पनि घानमा पारेका छन् । अदालतमा मुद्दा परेपछि साक्षी बकपत्र हुन्छ । अर्का कर्णेल राधाकृष्ण थापाले साथीको लहलहैमा लागेर नम्रतासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गर्दै बकपत्र गरेका छन् । तर, नम्रतालाई महेशसमशेरले घुमाउन लैजाँदा दुई जनाको बीचमा उभिएको फोटो अदालतमा प्रमाणस्वरुप पेश भएको छ । अर्थात्, उनीहरुको सम्बन्धको साक्षी कर्णेल राधाकृष्ण नै हुन्, तर अदालतसँग झुठो बोले, ‘होइन’ भनेर । राष्ट्रसेवक कर्णेल राधाकृष्ण अहिले अर्को मुद्दाको फन्दामा परेका छन्, झुठो बकपत्रसम्बन्धी । त्यस मुद्दामा जरिवानादेखि सेवा बर्खास्तीसम्मको सजायँ छ । यस्ता हाकिम नै शिक्षालयको हाकिम भएपछि सैनिकहरुले कस्तो तालिम पाउलान् ! जनअस्थाबाट
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि एमाओवादी नेता लोकेन्द्र बिष्टले राजीनामा दिएको खुलासा
संविधान जारी भएको ६ महिनामा २ हजार ५ सयले लिए अंगिकृत नागरिकता
कांग्रेस महाधिवेशन नरोकिने, कार्यवहाकमा पौडेल
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले भनिन् ‘ओली मेरो भाई, भारत नेपालको दाई’
सुझाव संकलन केन्द्र बानेश्वरमा झडप
देउवाले भनेः खुमबहादुरजी विमलेन्द्रलाई भारतले रोज्यो क्या
मोदी दस्तावेजको निस्कर्षः नेपालमा नयाँ संविधानले लोकतन्त्र मजबुत
रुपन्देहीका व्यापारीलाई लक्षित गर्दै गोली प्रहार ,मनोज पुनले घटनाको जिम्मा लिए